Emine-Bair-Khosar क्रिमीआ: वर्णन, इतिहास, रोचक तथ्य र समीक्षा
को underworld मा गएर को सपना देख्यो जो गरेको छैन, र एक रहस्यमय labyrinth मार्फत लक्षविना हिड्नु? अद्वितीय: Crimea मा थियो हरेकले, यो भन्दा सजिलो बनाउन Karst गुफाहरु को पठार Chater-बडी पिस्तौल एक प्रकृति आरक्षित मा अवस्थित छ। कटु पहाड को bowels मा धमकना गर्न तिनीहरूले क्रिमीआ को हृदय देखेको छ भन्छन्।
प्रकृति को चार साँचो चमत्कार prying आँखाबाट राख्छ Chater-बडी पिस्तौल। को गुफाहरु संगमरमर र Emine-Bair-Khosar, हजार र चिसो को तेजस्वी सौन्दर्य भूमिगत ग्यालरीमा एक अविस्मरणीय साहसिक को सपना, आगंतुकों पर्खिरहेका छन्।
सबैभन्दा impregnable गुफा
यसअघि वर्ष सयौं कुनै एक त्यहाँ मानव खुट्टा गएका, तर यसलाई मात्र प्रवेश एक विशाल ठाडो तरिकाले थियो, सबै भन्दा impregnable Emine-Bair-Khosar पनि Mammoth भनिन्छ थियो। र केवल 1994 मा सिम्फरोपोल देखि साहसी speleologists तल, सुरुङ को ढलान को स्तर परिवर्तन गरेर रहस्यहरुलाई धेरै भण्डारण गुफाको बाटो काट्न।
र एक वर्ष पछि यो अब आफ्नो जीवन जोखिम र सुविधाजनक खण्डमा लागि जाने जो सार्वजनिक, गर्न खोलिएको थियो।
कुनै मानिस उहाँले पूर्ण Emine-Bair-Khosar देखे भनेर भन्न सकिन्छ। दुई किलोमिटर भन्दा गैलरी को कुल लम्बाइ र बारेमा एक सय र असी मिटर गहिराइमा संग Crimea मा गुफा अचम्मको गुफाहरु, पत्थर झरने, वेल्स र मूर्तिहरु मा धनी छ। तसर्थ, जो Dungeons जादु संसारमा केही घण्टा जाने सबै ती, त्यहाँ अविस्मरणीय छाप धेरै छ।
वर्ष लाखौं पहिले भन्दा अविश्वसनीय प्राकृतिक सिर्जना सिर्जना गर्ने, पानी उम्लिरहेको थियो। को चूना Dissolving, यो एक वास्तविक जादूगर, फैंसी शिक्षा आकार जस्तै छ। Stalagmites र stalactites, तल बाट बढ्दै र overhanging शीर्ष, एकल जीव मा बुना - stalagnates।
Mammoth लागि जाल
धेरै जनावर लागि ठाडो तरिकाले एक मृत्यु जाल साबित भयो। कुनै पनि भित्र बच्न कुनै मौका थियो slippeth। को गुफाहरु मध्ये पछिल्लो को हल, र त्यसपछि गुफा Emine-Bair-Khosar भनिन्थ्यो Mammoth शरण पाइएन जो एक सानो Mammoth, को रहलपहल पत्ता, तर यो मात्र पशु जसको रहलपहल थिए speleologists फेला छैन। अब जंगली जनावर हड्डी एक गुफा बाहिर राखे र पर्यटकहरू आँखा अघि खुला।
छैन "अति गहिरो खाल्टो" को पाँच स्तर को सबै तिनीहरूले गुफा भनिन्छ रूपमा स्थानीय उनको अतिथि प्राप्त गर्न सक्छन्। तल्लो कोठा छाप र क्षेत्रहरु सुरक्षित छन्। निर्देशित भ्रमणका लागि खुला मात्र 700 भूमि व्यक्तिगत नाउँ बोकेका मीटर, गुफाहरु र ग्यालरीमा दर्जनौँ विभाजित छन्।
गुफाको गर्न प्रवेश भूमिगत कथाहरू र हडताली शोभा को मुख्य हल आगन्तुकहरूलाई ल्याउँछ जो paleontological संग्रहालय, सुरु। यसको विशाल Vaults प्रभावशाली stalactites आकार, शानदार सौन्दर्य captivates कि समावेश।
Dublyansky हल र सिंहासनको
Dublyansky एक अद्भुत आश्चर्य लागि प्रतीक्षा सबै आगंतुकों को हल मा - दुई-टियर anhydrous calcite ताल प्राकृतिक स्मारक क्षरण छ।
र बायाँ छेउमा सिंहासन कक्ष, सुन्दर अद्वितीय शिक्षा "Monomakh गरेको ढक्कन" उज्यालो छ, जो, एक हिउँ-सेतो चूना curd छ वर्षाको मौसममा बढ्दै छ।
Emine-Bair-Khosar हल Dublyansky एउटा कृत्रिम टनेल 60 मीटर को अचम्मको मूर्तिहरू हल लम्बाइ र जडान राख्छ, 13 वर्ष पहिले punched।
पर्यटकहरु आनन्द संग स्थिर, र केही मानिसहरू चेस परी कथा, जहाँ बल जो यति धेरै शिक्षा हुर्किने जस्तै राजा र रानी, को आंकडा अधीनमा छ थिए ठान्छन्। र धेरै मूर्तिपूजक पत्थर मूर्तिहरू हेर्नुहोस्।
सबै भन्दा ठूलो मूर्ति लम्बाइ 10 मिटर छ, र stalagmites बीच कम कल्पना आगंतुकों अनौठो जनावर, चरा र पनि बालिका को तस्बिरहरू सिक्न छ।
पर्खालहरु पत्थर झरने को बीस मिटर देखि बाँकी, फूल र रंग calcite incrustations संग सजाया छ।
अर्को Grotto "खजाना" को नाम नै लागि बताइएको छ। helictites - क्याल्सियम लवण, पानी र हावा, मिलेर अद्वितीय प्राकृतिक सिर्जना त्यहाँ प्रबल। विभिन्न दिशामा घुमाई, तिनीहरूले साना सर्पिल वा उत्कृष्ट सूत्रहरू सदृश। अतिथिहरूको हैरानी छन् गुफा पहिले अर्को ग्रह देखि परदेशी जस्तो देख, नवीनता देखेको छैन।
केस्कमेट को हल
ठूलो कोठा Kechkemet एक ज्वालामुखी आकार resembling सानो stalagmite ज्ञात चकलेट क्रिम रङ्ग पानी रंग। यो भित्र, त्यहाँ पनि एउटा सानो ज्वालामुखीको मुख, प्रत्येक पारित दिन संग विस्तार हो।
यो सबै भन्दा राम्रो ध्वनिक हल विशाल गुफा भनिन्छ केही लागि छैन। र यो कुरामा विश्वस्त गाइड सबै अतिथि, खासगरी यो Grotto स्तम्भहरू र mesmerizing गहिरो ध्वनि को भल्ट मा सुसज्जित देखि खन्याइदिएकी कि संगीत समावेश गर्नुहोस्।
पाहुनाको सत्कार गर्ने स्त्री हल
तल्लो स्तर, पत्ता लगाउन खुला मध्ये, mainsail जहाँ आंकडा लट braids संग स्पष्ट पातलो केटी देखेको छ "हल गृहिणी", भनिन्छ।
त्यहाँ धेरै गुफाहरु, पर्यटकहरु खुला छैनन्, तर उपकरण पहिले नै काम गर्दै छ, र यो तिनीहरूले पूर्व कला को सौन्दर्य र विशिष्टताको overshadow देखिन्छ।
सुरक्षित प्राकृतिक आश्चर्य
यसलाई उल्लेख लायक छ कि गुफा Emine-Bair-Khosar - यो संसारमा सबै भन्दा कडाई सुरक्षित प्राकृतिक masterpieces को छ। वैज्ञानिकहरूले राम्ररी सबै वर्ष लाखौं को भूमिगत ग्यालरीमा भयो, र यति सम्म कोठा मात्र एउटा सानो भाग छानबीन कि प्रक्रियाहरू अध्ययन गरेको छैन।
तसर्थ, पर्खालले घेरिएको तल्लो स्तरों गर्न प्रवेश, मात्र पर्यटकहरु को विशाल भ्रमणहरू, तर cavers लागि सन्तानहरू grottoes को inviolable महानताका र तिनीहरूलाई मा microclimate संरक्षण गर्न।
एक पटक मात्र पाँच वर्ष मा, केही वैज्ञानिकहरू पहुँच तिनीहरूले आवश्यक अनुसन्धान सञ्चालन र फेरि माथि bricked कि पत्ता लगाउन।
Emine-Bair-Khosar: त्यहाँ कसरी प्राप्त गर्ने?
क्राइमन ल्यान्डमार्क, युरोप सबैभन्दा सुन्दर द्वारा पहिचान, सिम्फरोपोल नजिकै स्थित छ। पहिलो, तपाईंले याल्टा को दिशा मा जाने, र त्यसपछि छापिएको जो मार्मारा को गाउँमा, रोल आवश्यक माटो सडक को Chater-बडी पिस्तौल गर्न प्रमुख।
र सिम्फरोपोल भएका ती गाउँमा जाँदै, एक ट्रली वा बस, फसाउन सजिलो तरिका हो। सडक हिड्ने केही घण्टा - र पाहुनाहरूको तल्लो पठार Chater-बडी पिस्तौल गुफा Emine-Bair-Khosar मा हुनुको रहस्य केही प्रकट हुनेछ। ब्रेकमा र सप्ताहन्तमा बिना 18.00 गर्न 8.00 देखि - उनको काम गर्दा।
घण्टा र वयस्क र बच्चाहरु जस्तै भूमिगत जटिल को ग्यालरीमा को आधा भ्रमण। थ्रिल्स त्यहाँ चरम मार्ग विशेष उपकरण र जो कि गुफा Emine-Bair-Khosar मा प्रशस्त शानदार दृश्य अन्वेषण गर्न अनुमति दिन्छ आत्म-बीमा, को माध्यम संग प्रेमीहरूलाई लागि।
भ्रमण लागत 30 मिनेट र दुई-घण्टा यात्रा को लागि 350 1200 rubles देखि दायरा।
सम्झना गर्न अद्वितीय स्थलहरुको लागि एक यात्रा। पर्यटक मात्र एक अविस्मरणीय अनुभव दिने, डिजाइन मार्गहरू याद गर्नुहोस्। गुफाको सौन्दर्य तेजस्वी र यसको मात्रा हामीलाई प्रकृति को महानता विचार बनाउन, संसारको आठौं आश्चर्य सिर्जना गरियो।
Backpackers - सजिलो, सस्ता, अधिक रोचक छ!
लोकप्रिय रेस्टुरेन्ट Yeisk
जहाँ अप्रिल मा आराम गर्न: देश र घटनाहरू
भियतनाम के ल्याउन। यात्रा सुझाव
यात्रा। म एक यात्रा मा जा, भाषा सिक्न चाहिन्छ
आफ्नो जाँगरको गर्न प्रमुख रूपमा बोट वृद्धि को Stimulators।
ब्राजिलका राष्ट्रिय पकवान। परम्परागत र मुख्य पाठ्यक्रम ब्राजील
किन बच्चाहरु रात मा सुत्न छैन: मुख्य कारण
दर्शन मुख्य प्रश्न
लक्ष्य लिएको छ र उच्च पारिस्थितिक जोखिम कम्पनीहरु को अडिट को उद्देश्य
30 को एक महिला लागि आधारभूत दराज, 40, 45, 50 वर्ष पुरानो (फोटो)
केक "मामोथ"। पकाउनुहोस्
Cardan सापट "KamAZ": मरम्मत र प्रतिस्थापन
लोभोर र उनको पहेली को भव्य झील